မဒမ်ကိုး: ရေကာတာများ၏ ဆိုးကျိုးခံနေရသော ပြည်သူများအတွက်
ရေကာတာများ၏ ဆိုးကျိုးခံနေရသော ပြည်သူများအတွက်
ဧရာဝတီနဲ့ ပါတ်သတ်တာတွေပဲ ဒီရက်တွေမှာလိုက်ရှာရင်းနဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ် ရှာတွေ့မိတယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော့ကို သဘောကျတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှား နေတဲ့ ပြည်သူများအတွက် ရေကာတာတည်ဆောက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးအပြစ်တွေ၊မည်သို့မည်ပုံလှုပ်ရှားသင့်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့ စာအုပ်ကောင်း တကယ့်တစ်အုပ်ပါပဲ။စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ စာအုပ် လိုက်ရော download လုပ်နိုင်အောင်ပါ ပြန်မျှတယ်ဗျာ။တကယ် ဖတ်ရှုသင့်တဲ့စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ်ပါ။
PDF လိုချင်သူများ အောက်မှာ download ယူနိုင်ပါတယ်။
﻿ဒီနေရာကို ကလစ်ပြီး ရယူပါ။
Labels: စာအုပ်, ဧရာဝတီ
ဒီလိုတော်လို့ မဒိုးကန်က အချစ်သည်းနေတာ ရှိမယ်။ ရတတ်တယ်။
ကျေးဇူးပါပဲ . ..ဖတ်လိုက်ဦးမယ်။
မဒိုးကန် တော်ပါပေ့ ရှာဖွေတတ်ပါပေ့...
အင်း လူတွေကတော့ မဒမ်းကိုးးပဲ သိကြသကိုးးးးဗျ . . . မဒန်ကိုး ရှာဖွေတော်တယ်ဆိုပဲး))
တို့ ကိုရင်ကြီး သနားပါတယ်ဗျား)))
ဟို စာချိုးလို ဖြစ်နေပီးး)) ဘာတဲ့
သူကြီးဘုရား ရွာသားကောင်းမှု ဆိုသလို မဒမ်ကိုးး ဘလော့ ကိုရင့်ကလောင် ပေါ့း)))))
lady first မို့ မိန်းမကို ဦးစားပေးထားတား)))
တို့ကိုရင်တို့ ချစ်တတ်ပုံများး))
ဟိ အကိုတော်ယောက်ဖ . . . ဆေးစွမ်းကောင်း လေးများ ရှိရင် မစတော်မူပါး)))
ရှာဖွေပြီး ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ။
ပုံတွေနဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့အရေးအသားတွေက တကယ်ကို ဗဟုသုတ်ရတယ်။
ကိုရင်နဲ့ ဒိုးဒိုးတို့ရေ ရှဲရှဲကွယ် ရှဲရှဲဟေ့ သိလား။
ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ်ပါခင်ဗျာ။ ရှဲပေးတဲ့ ကိုရင့် ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
သူတို့ဆီရောက်ရင် မန့်မှ .. မမန့်ရင် ရူပါမလန်းဘူး ထင်သွားမစိုးလို့:P :P
ဟင့် ငါတော်လို့ ရှာယူထားတာပေါ့..
မဒိုးကန်တော်တာကိုဝန်ခံလိုက်စမ်းပါ တံခါးရယ် အဲ ဗညားရယ်း)
တော်ကြာ ကိုရင် ဘ၀င်မြင့်သွားအုံးမယ်းး) ဟိ ။
အခုတော့ ဒေါင်းသွားပြီး မျက်လုံးးး)
လောလောဆယ် အရင်ဒေါင်းသွားပြီ ကိုရင် နောက်နေ့ မှ အေးဆေးဖတ်တော့မယ်...
fb မှာ သူများရှယ်ထားတာတွေ့လို့ ဒေါင်းပြီး ဖတ်ပြိးပြီ ဆိုဒ်မှာတော့ ခုမှပဲ လာမန့်တယ် အကို
တန်ဘိုးရှိတဲ့ ဗဟုသုတလေးမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုရင်ရေ။ မဒိုးကမ်သတိရတယ်း)
သာဓုပါ... အဲ..... ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။
(ရန်ဖြစ်ကြမယ်ဆို ကြိုပြောနော်။ သေနတ်ဒီမှာ ပေါတယ်) ဟီးဟီး။
ကျေးဇူးပဲ ကိုရင်ရေ...ရှာရမှာ ပျင်းတာနဲ့ အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်...လောလောဆယ်တော့ မံမံအတွက် အလုပ်များနေလို့ အားမှပဲ ဖတ်ဖြစ်တော့မယ်...မံမံသရဏံဂစ္ဆာမိလုပ်နေရတဲ့ ဘ၀ကိုးဗျ...
အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပါအုံးမယ် အစ်ကိုရင်ရေ။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ အစ်မဒိုးရောနေကောင်းရဲ့လား? နားရော... မကြားချင်ရောင်ဆောင်နေတုန်းလား? အဲလေ... ကြားသွားပြီလားလို့ မေးတာ။ ဟီး... :P